UkuPhakanyiswa okuPhakamileyo okuQhelekileyo kweBrazil Carbide Tip yeZicelo zeZonyango
Ukutsalwa kweCarbide kucacile iukuqamba ubhedu Inkqubo apho kusetyenziswa izinto zethiphu eqinileyo kwizixhobo ezisisiseko ukuvelisa umda wokusika onzima kakhulu.
Injongo yesi sicelo: Ukunyanzeliswa kwe-carbide yokuthambisa izixhobo zonyango Bangathanda ukusebenzisa itekhnoloji yokufudumeza indawo ukubuyisela iitotshi kunye nokufezekisa inkqubo yokuhombisa ucoceko.
Ukuchithwa kwezixhobo zeBrazil:
I-DW-HF-15 izixhobo zokusebenza zokujonga ukukhanya ibekwe kwi-40% ukugqiba inkqubo. Ulawulo lwesigaba sedijithali esisebenzayo sisebenza ngokukuko kuluhlu olubanzi lokuhamba rhoqo.
Ipleyiti engenasici engenasici 6 13/16 "(17 cm) ubude ene-0.775" (1.96 cm) ububanzi bendawo yokufudumeza kuye kwafuneka idityaniswe nge-carbide ifaka i-25/32 "(1.98 cm) ubude, 1/8" (7.8 mm) ububanzi, 3/32 ”(2.54 cm) ubunzulu. Kwakukho ukuhlangana okungu-9/16 ”(1.42 cm) ubude, 1/8” (25.4 mm) ububanzi (kwicala ngalinye lokusika intloko) kunye no-1/16 ”(1.58 mm) ubunzulu.
I-Brazing flux yasetyenziswa kwindawo edibeneyo. Ukufakwa kwe-carbide emva koko kwabekwa phakathi kweefom zangaphambili. Indibano yavalwa kunye yangeniswa kwi i-coil coil. Ubushushu busetyenziselwe imizuzwana eyi-8 efikelela kubushushu be ~ 1400 ° F (760 ° C). Amacandelo adityaniswe ngempumelelo ngokudibeneyo.
iindidi Teknoloji tags ukugquma, i-carbide, Ukurhola iKhabhayithi yeCarbide, ibhondi ye-carbide yokuthambisa, ibhondi ye-carbide yokuthambisa i-heater, Ukutsalwa kweCarbide, I-HF ibarbide ye-carbide, I-HF yokukhangela i-carbide, ukukhangela ibhondi, ukutyunjwa kwebhodi, Ukuchithwa kweCarbide Carbide, Ukunyanga izixhobo zonyango, ukuthintela ubhedu Post yokukhangela